ရုတ်တရက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားတာကြောင့် မဖြေဆည်နိုင်အောင်ငိုကြွေးနေရှာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း…. – Cele Oscar
ရုတ်တရက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားတာကြောင့် မဖြေဆည်နိုင်အောင်ငိုကြွေးနေရှာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း….
ပရိသတျကွီးရေ လကျရှိမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ ကိုဗဈ ရောဂါကပျဆိုးကွီးနဲ့ပတျသတျပွီးနရောတျောတျော မြားမြားတှမှော ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုနှုနျးတှကေ မြားပွားလကျြရှိနပေါတယျ။ရောဂါပွငျးထနျမှုတှကွေောငျ့ နဲ့ အောကျဆီဂငျြမလုံလောကျမှု တှကွေောငျ့အသကျမဆုံးရှုံးသငျ့ပဲ ဆုံးရှုံးနရေပါတယျ။
ရောဂါကူးစကျခံရထားတဲ့သူတှထေဲမှာဆိုရငျသရုပျဆောငျနနျးမွတျဖွိုးသငျး ရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကို တာတာမြိုး လဲအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ဒီကနသွေ့ဂုတျလ၂၁ရကျနမှေ့ာဆိုရငျတော့သရုပျဆောငျနနျးမွတျဖွိုးသငျးရဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူကိုတာတာမြိုး ကကိုဗဈရောဂါဖွငျ့ကှယျလှနျသှားကွောငျးသိရှိရပါတယျ၊မိသားစုနဲ့ထပျတူဝမျးနညျးရပါတယျနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုဗစ် ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးနေရာတော်တော် များများတွေမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းတွေက များပြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ရောဂါပြင်းထန်မှုတွေကြောင့် နဲ့ အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှု တွေကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်ခံရထားတဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို တာတာမျိုး လဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သြဂုတ်လ၂၁ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုတာတာမျိုး ကကိုဗစ်ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်၊မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်နော်။
ပရဟိတ ဂေဟာအတွက် ဆန်အိတ် (၁၀) အိတ်တိတိကို လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အိချောပို……